Dowladda Farmaajo oo lasoo baxday xeelad cusub & Ciidamadii ugu badnaa oo ay ku wajahayso Jubbaland + Dagaal miyaa…
HARGEYSA(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya deegaanka Xanan Buuro ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in duleedka deegaankaasi laga dhisay xero ciidan taas oo lagu ururinayo dhalinyaro oo loo tababarayo dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhalinyaradani oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa laga kala keenay degmooyinka goboladda Mudug iyo Galgaduud, kuwaas oo tababar fiican looga bilaabay xeradaasi.
Xoggo ay heshay Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in dhalinyaradan inta badan laga kala keenay degmooyinka Hobyo. Bacaad weyn, Galinsoor, Caabudwaaq, Cadaado, Godinlabe, Balanbale, Gadon, Mareergur, Xarambuure iyo Xeraale, kuwaas oo dowladda Farmaajo ay ku bixinayso dhaqaale badan.
Tiradooda aya waxaa lagu sheegay 1000 ilaa 2000 oo dhalinyaro ah, kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal halka saraakiisha horboodaysa mashruucani ay kasoo kala jeedaan Dhuusamareeb, Cadaado iyo Caabudwaaq kuwaas oo xidhiidh dhow la leh madaxda dowladda dhaqaalahana si toos ah uga hela Villa Somalia.
Tababarida ciidamadani cusub ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya gacan ka siinaya dowladda dalka Qadar, kuwaas oo loo diyaarinayo in ay ka qayb qaataan dagaalo ka dhan ah Jubbaland iyo in ay xaqiijiyaan dhismaha dekadda Hobyo oo ay dhisayso dowladda dalka Qadar.
Marka laga yimaado ujeedka ciidamadani cusub laga leeyahay ayaa waxaa hadana sii xoogaysanaya xiisadaha u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland, kadib doorashooyin is diidan oo ka dhacay Kismaayo waxaana ay sheegeen ciidamada Kenya ee AMISOM in weerar ay kala kulmeen bishii hore ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo watay doonyo dheeraaya xili ay ku sugnaayeen Kismaayo.